Waxay u eg tahay inaad booqato waddan aan si rasmi ah u jirin | Somalisan.com
Home Afsomali Waxay u eg tahay inaad booqato waddan aan si rasmi ah u...
What it’s like to visit a country that doesn’t officially exist Jul 6, 2020
Waxay leeyihiin dowlado u gaar ah, baasaboorada, muwaadiniinta iyo xitaa lacag mararka qaarkood.
Laakiin sababo badan oo cakiran awgeed, dalal badan oo adduunka ah si rasmi ah ugama jiraan – qaarkood ayaa xitaa laga daayaa khariidadaha.
Taasi kama joojin in Guilherme Canever isku dayo inuu booqdo iyaga. Qoraaga reer Brazil ayaa u safray 16 wadan oo aan aqoonsi ah intii u dhaxeysay 2009 iyo 2014 wuxuuna ka sheekeeyay waxyaabihii uu soo maray buugiisa ugu dambeeyay “Wadamada aan la aqoonsan: Safarada ay ku tagayaan Wadamada aysan jirin,” oo la sii daayay bishan.
In kasta oo qeexitaanka dalku u furan yahay fasiraad, in loo tixgeliyo sida ku xusan sharciga caalamiga ah, dhulku wuxuu u baahan yahay inuu yeesho dad rasmi ah, dhul cayiman iyo kontarool xuduudeedka, awoodda uu isagu iskiis u maamuli karo iyo xiriirka uu la leeyahay waddamada kale.
Dhibka ugu dambeeya ayaa ah helitaanka aqoonsiga qaramada midoobay, kaas oo la imanaya faa iidooyin badan sida helitaan badan shabakadaha dhaqaalaha.
Kuwaas oo UN-ku aqoonsanayn si rasmi ah looma aqoonsado inay yihiin dalal, xitaa haddii ay u aqoonsan yihiin dalal kale, waxayna taasi la kulmi kartaa dhibaatooyin badan.
Canever wuxuu si xamaasad leh ula soo shaqeeyay dalal la isku khilaafsan yahay ka dib markii uu booqday Somaliland, oo ah waddan rajo ka qaba Geeska Afrika oo xornimo ka doontay Soomaaliya ilaa 1991.
“Waxaan safar ku marayay Afrika meel aan ka socdaa sanadkii 2009 waxaanan ku dhammaaday inaan aado Somaliland,” ayuu u sheegay CNN Travel. “Waan argagaxay markaan ogaaday inaanan halkaas ku isticmaali karin lacagtii Soomaaliya. Kadib waxaan bilaabay inaan fahmo inay ummadani leedahay hay’ado, sharciyo iyo lacag.
“Laakiin waddan kale looma aqoonsanin. Waxay u muuqatay inaan ahay meel caalami ah oo is barbar socota.”
In kasta oo ay si iskeed ah ugu dhawaaqday madax-bannaanida Soomaaliya 1991-kii, Somaliland waligeed umay aqoonsan dal madaxbanaan dal kale.
Previous articleThe United States is ‘looking at’ banning TikTok and other Chinese social media apps, Pompeo says
Next articleXisbi SIyaasadedka Soomaaliyeed ee somalisan oo soo dhaweeyey Hadalkii Gudiga Doorashooyina ee Xaliimoo yarey
Dil toogasho ah oo hada ka dhacay Muqdisho iyo ciidamo gaaray goobtii uu ka...
Somalisan News - December 13, 2017
Aqriso Wasiir maareeye oo amaro hor leh dul dhigay Shirkadaha Diyaaradaha, Isbitaallada, Jaamacadaha, Dalladaha...
Somalisan News - March 26, 2018